SanDisk Ukunikezwa | Data Recovery
Home → SanDisk Ukunikezwa
Uhlelosimo Mac Software
Uma ufaka i-software kukhompyutha, futhi uma ugijima it okokuqala, you ngalesosikhathi sebezoyalelwa kusebenze isofthiwe. Ngemva kokufaka, uzonikezwa isixhumanisi ekhasini kusebenze. Ngiyacela, ulandela isixhumanisi futhi ugcwalise ifomu, kufaka phakathi ukufaka inombolo ye-serial etholakala kokunikezwayo ukuze kusebenze ukuthenga kwakho kwamahhala konyaka owodwa kwesoftware ye-RescuePRO ®. Chofoza lapha ukuze uthole yesinyathelo ngesinyathelo Umhlahlandlela ukusebenza
Ngicela uqaphele, uma usanda wathenga SanDisk USB drive, futhi isigqebhezana yakho elihambisana idrayivu ye-USB ukuze RescuePRO has a nenombolo ye-serial ukuthi iqala RPRID-0501, Ngiyacela chofozani lapha ukubona i thwebula kwakho RescuePRO Deluxe.
Ngicela uqaphele, uma i-computer ufaka ku ayixhunyiwe ku-inthanethi, lapho-ke ungathumela i-imeyili inombolo yakho yesicelo sokuqalisa ku-RescuePRO® Support, futhi sikwazi ukukunika i Code Ukuqalisa.